တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: January 2008
မပြောမဆိုနဲ့ ကျမ ပျောက်သွားရတဲ့ အကြောင်းကို ရှင်းပြပါမယ်။ ဒီကို မလာခင် ကျမ မိဘတွေကို ကတိ တခု ပေးခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဒီကို ရောက်ရင် ဘလော့ ပြန်မရေး တော့ပါဘူး ဆိုတဲ့ ကတိပါ။ အဲဒီကတိက စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့ကနေ အောက်တိုဘာ ၂၉- ရက်နေ့ထိသာ တည်ခဲ့ပါတယ်။ စာမရေးရရင် မနေနိုင်တဲ့ ကျမ ... မိဘတွေကို ပေးခဲ့တဲ့ ကတိကို ဖောက်ဖျက်ပြီး ဘလော့ ပြန်ရေးမိတယ်။ နောက်တော့ ဒီအကြောင်းကို ကျမ အမ သိသွားပါတော့တယ်။
အဲဒီရဲ့ အကျိုးဆက်ကတော့ ... ဘလော့အပြင် အင်တာနက် အီးမေးလ်နဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုခွင့်ပါ ရပ်နားခြင်း ခံလိုက်ရပါတယ်။ ဒီအသက်အရွယ် ရောက်နေပေမဲ့ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ် မရပ်တည်နိုင်သေးတဲ့ ကျမ အနေနဲ့ သူတို့ကို လွန်ဆန်နိုင်ခြင်း မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ ကျမ ဘလော့ရေးခြင်းကို ရင်နာနာနဲ့ ရပ်နားထားရတာပါ။
အခုလား ... လိုင်ဘရီကနေ ... ခဏလာသုံးနေတာပါ။ ဒီလိုပဲ ကျမက အမိန့်ဆို ဖီဆန်တတ်တဲ့ အကျင့်နဲ့ လက်တလုံးခြား လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်လေးက ကျန်သေးတော့ ဒီစာကို ရေးပြီး တင်လိုက်တာပါ။
မော်ဒရိတ်လုပ်ထားတဲ့ ကွန်မန့်တွေကို ကျမကိုယ်စား တင်ပေးနေတဲ့ ကိုစေးထူးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်လည်း ကျမဘလော့လေးကို ဆက်ပြီး စောင့်ရှောက် ထားပေး ပါဦး။
အားလုံးကို ခဏနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ နောက်တော့ အိမ်နဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းပြီး နားလည်မှု ပြန်ရတဲ့အခါ .... ဘလော့လေးဆီ ပြန်လာခဲ့ပါမယ် ... ။
လောလောဆယ်တော့ .... .... ....
မတတ်သာလို့ ခပ်ခွါခွါ နေရပါဦးမယ် ...။
၂၁၊ ဇန်န၀ါရီ၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်
Posted by မေဓာဝီ at 11:17 PM 24 comments
နေရာတကာ စပ်စပ် စပ်စပ် ပါချင်တဲ့ ကျမဟာ ကျောင်းမှာ ဘယ်သူမဆို အခမဲ့ တက်လို့ရတဲ့ ယောဂသင်တန်းကို တက်ခဲ့မိပါတယ်။ ယောဂဆိုတာ စာအုပ်တွေထဲသာ ဖတ်ဖူးတာ ဘယ်လိုလုပ်ရတယ် သေချာ မလေ့လာ ခဲ့ဖူးတော့ သိပ်ခက်ခဲ လောက်မယ်လို့ မထင်မိဘူး။သင်တန်းဆရာမ မမအစ်ဇဘယ် ကလည်း ယောဂဆိုတာ မင်းတို့ဆီက meditation လိုပဲ လို့ ကျမ စိတ်ဝင်စားအောင် ဆွယ်ရှာပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ မမအစ်ဇဘယ်ကို ကျမလည်း တက်မယ်လို့ ကတိပေးပြီး နာမည် စာရင်း ပေးလိုက်တယ်။ သင်တန်းက တပတ်မှာ ၂-ရက် အင်္ဂါနဲ့ ကြာသပတေး နေ့တွေမှာ ရှိတာ ဆိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ အင်္ဂါနေ့က စတက်ခဲ့တယ် ဆိုပါတော့။
“သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်မယ့် အ၀တ်အစား ၀တ်ခဲ့၊ ယောဂ ဖျာ မရှိရင် မျက်နှာသုတ်ပုဝါ အကြီး ယူခဲ့ ...” ဆိုတဲ့ မမအစ်ဇဘယ် မှာတဲ့အတိုင်း ၀တ်စားဆင်ယင်ပြီး ညနေ ၅ နာရီခွဲမှာ သင်တန်းလုပ်မယ့် Chinese Embassy ဆိုတဲ့ အဆောက်အဦးလေးဆီ သွားရပါတယ်။
အသီးသီး နေရာယူပြီးတဲ့နောက် ဥုံ ၃-ခါ အော်ပြီး သင်တန်းကို စပါတယ်။ စစချင်း ပက်လက်လှန် အိပ်တဲ့ အနေအထားနဲ့ မျက်စိကိုမှိတ်၊ တကိုယ်လုံးက အကြောအချင်တွေကို လျှော့ချပြီး အသက်ကို ၀၀ရှူသွင်းရပါတယ်။ နောက် တကိုယ်လုံးကို ဆန့်ထုတ်ပြီး အသက်ပြင်းပြင်း ရှူရပြန်ပါတယ်။ စိတ်ကို အသက်ရှူတဲ့ဆီမှာပဲ အာရုံ စိုက်ထားရပါတယ်။ အဲဒီနောက် တင်ပလ္လင်ခွေ (meditation post) ပုံစံ ထိုင်လိုက်ပြီး လက်ကို ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း လက်ညှိုးနဲ့ လက်မ၀ိုင်းထားတဲ့ မုဒြာပုံစံ ထားရပါတယ်။ ပြီးတော့ 1, 2, 3,4ရေတွက်ပြီး အသက်ရှူသွင်း ရတယ်။ ရှူထုတ်တဲ့အခါကျတော့ 1 ကနေ 8 ထိ ရေတွက်ရပါတယ်။
တခါ ညာဘက် လက်ညှိုးနဲ့ လက်ခလယ်ကို ကွေးထားပြီး ကျန်တဲ့ လက် ၃-ချောင်းကို ထောင်၊ လက်မနဲ့ ညာဘက် နှာခေါင်း ပေါက်ဝကို ပိတ် .. ဘယ်ဘက် နှာခေါင်းနဲ့ အသက်ရှူသွင်း၊ လက်သူကြွယ်နဲ့ ဘယ်ဘက် နှာခေါင်းပေါက်ကို ပိတ် ... ညာဘက် နှာခေါင်းနဲ့ အသက်ရှူထုတ်၊ နောက် လက်မပြာင်းသေးဘဲ ညာဘက် နှာခေါင်းနဲ့ အသက်ရှူသွင်း၊ လက်ပြောင်း ... ဘယ်ဘက် နှာခေါင်းနဲ့ အသက်ရှူထုတ် ... အဲဒါမျိုး တစုံလုပ်ရင် တခါ လို့ ရေတွက်ပြီး ၄-ခါ လုပ်ရပါတယ်။
အဲဒီလောက်ကတော့ အဆင်ပြေပါသေးတယ်။ ပုံစံ တမျိုးကနေ တမျိုးပြောင်းတိုင်း ဥုံ ခံပြီးမှ ပြောင်းတာကိုလည်း သတိထား မိပါတယ်။ နောက် ... တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အဆင့်တွေ တက်လာပြီး သစ်ပင်ပုံစံ အနေအထား၊ နေကို မျှော်ကြည့်တဲ့ ပုံစံ အနေအထား၊ ဇောက်ထိုးပုံစံ၊ ကလေးငယ်ပုံစံ၊ ခြေထောက်မြှောက်ရ .. ကျွမ်းထိုးရ မျိုးစုံ လုပ်ရပါတော့တယ်။ ခန္ဓာကိုယ် ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် ဘာလေ့ကျင့်ခန်းမှ မလုပ်တာ ကြာပြိဖြစ်တဲ့ ကျမရဲ့ အကြောအခြင်တွေဟာ အရမ်းကို တောင့်တင်းနေတာကြောင့် ပြောတဲ့အတိုင်း လိုက်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ မနည်း ကြိုးစားပြီး ဖတ်ဖတ်မောအောင် လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။
ယောဂရဲ့ အဓိက အချက်ကတော့ စိတ်တည်ငြိမ်ဖို့နဲ့ ကိုယ်လုပ်တဲ့ ပုံစံပေါ်မှာ အာရုံ စူးစိုက်ဖို့ပါပဲ။ ယောဂ လေ့ကျင့်ခန်းဟာ ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ကြံ့ခိုင်စေပြီး သွေးလည်ပတ်မှု၊ နှလုံး၊ အဆုတ် စတဲ့ ကလီစာတွေရဲ့ ကြံ့ခိုင်မှုကိုပါ အထောက်အပံ့ ပြုစေတယ်လို့ မမအစ်ဇဘယ်က ရှင်းပြပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ မလုပ်နိုင် လုပ်နိုင်နဲ့ ကြိုးစားပမ်းစား လုပ်ရင်း၊ သူမမြင်ရင် ခဏတဖြုတ် ရေသာခိုရင်းနဲ့ ၇-နာရီ ထိုးတဲ့ အခါ ဘုရား (သို့မဟုတ်) ယောဂ ဆရာကြီး အပါအ၀င် ကျေးဇူးရှင်များ ကို ကန်တော့တာတို့ ကမ္ဘာကြီး ငြိမ်းချမ်းစေဖို့ ဆုတောင်းတာတို့ လုပ်ပြီး ဥုံ ခံပြီး အတန်းဖြုတ်လိုက်ပါတယ်။
ယောဂသင်တန်းအပြီး ညစာစားတော့ ခါတိုင်းနေ့ထက် ပိုပြီး စားလို့ကောင်းသလိုပဲ ... ဒါနဲ့ အများကြီး စားပြီး ... အ်ိပ်ရာဝင်ခဲ့ပါလေရော ... ။
၁၀၊ ဇန်န၀ါရီ၊ ၂၀၀၈
(ယောဂရဲ့ ပုံစံလေးတွေ နမူနာ ကြည့်ရအောင် ရှာပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။)
Posted by မေဓာဝီ at 9:21 PM 20 comments
Posted by မေဓာဝီ at 11:23 PM 16 comments
အေးစက်စက် ရာသီအောက်မှာ တယောက်ထဲ ပြန်ရမှာမို့ ငိုချင်လျက် လက်တို့ ဖြစ်လို့နေသည်။ ပိတ်ရက်ရှည်မှာ ဘာမှ မလုပ်ဘဲ နေတာ များသွားတော့ လူက ခပ်ထိုင်းထိုင်း ဖြစ်နေပြီ။ ကျောင်းရောက်ရင် သည်လို နေ၍ မရတော့။ စိတ်ထဲက ပါပါ မပါပါ ပြုံးရ၊ ရယ်ရ၊ နှုတ်ဆက်ရ၊ လောကရဲ့ ၀တ္တရားတွေ၊ ပဋိသန္ဓာရ စကားတွေ ဆိုရပေဦးမည်။ ပြီးတော့ ... သွားရ၊ လာရ၊ လှုပ်ရှား ရုန်းကန် ရပေဦးမည်။ တွေးရင်းတွေးရင်းနှင့် စိတ်က လေးလေးလို့ လာ၏။ ကျောင်းဆိုသည့် အသံကိုပင် မကြားချင်။ ငယ်စဉ် ကတည်းက ကျောင်းပျင်းလေ့ရှိသည့် စိတ်က ယခုထက်ထိတိုင် အကျင့်ပါ နေဆဲ။ အကျင့် ဆိုသည်ကလည်း ဖျောက်ခဲ နိုင်သားလား။
သည်လိုနှင့် ညနေမစောင်းခင် ဘတ်စ်ကားဂိတ်ကို သွားဖို့ အထုတ်အပိုး ပြင်ရသည်။ အိမ်နှင့် ကားဂိတ်က သိပ်မဝေးလှ သော်လည်း သယ်ရမှာတွေက မနည်း။ အပြည့်အကျပ် အထပ်ထပ် ထည့်ထားသည့် ကျောပိုးအိတ်က တလုံး၊ တနင့်တပိုး ထိုးထည့်ထားသည့် ပခုံးလွယ်သော ဂျင်းအိတ်က တလုံး၊ ထိုးထိုးကျိတ်ကျိတ်ဲ သိပ်ထည့်ထားသည့် ဘီးတပ် လက်ဆွဲ သေတ္တာငယ်က တလုံး၊ ထို အိတ် ၃-လုံးနှင့် ရုန်းရ ပေဦးမည်လေ။
သွားခါနီးမှ ကပ်ပြီး ကွန်ပျူတာပိတ်၊ မီးပိတ်၊ တံခါးပိတ်ပြီး အိတ် ၃-လုံးနှင့် ကိုးရိုးကားရား ကားလမ်းဖြတ်ကူးဖို့ စောင့်တော့ ကားတွေက သနားပြီး ရပ်ပေးကြသည်။ ကားတစီးက အဝေးကြီး ကတည်းက မီးတချက် တောက်ပြကာ သွား … သွားဟု ပြောသည်မို့ ကျေးဇူးတင် လက်ပြပြီး ကားဂိတ်ဆီ အသော့နှင်၊ ကားဂိတ်က screen မှာ ကျောင်းသို့ ရောက်မည့် ကားလာချိန်ကို ဖတ်ပြီး ခုံတန်းလေးမှာ ထိုင်စောင့် နေရသည်။ ကားခ ၂ ကျပ် ၇၅ ပြားကို အသင့် ထုတ်ထားပြီး ၁၅ မိနစ် ခန့် အကြာမှာတော့ စီးရမည့် ၇၆ နံပါတ် ဘတ်စ်ကားကြီး ဆိုက်ရောက် လာချေပြီ။
ကားပေါ်တက် လက်မှတ်ဖြတ် နေရာယူပြီးနောက် ကျောင်းရောက်အောင် ၁ နာရီ လောက် ကြာဦးမှာမို့ တလမ်းလုံး တွေးတလှည့် ငိုက်တလှည့် စီးနင်း လိုက်ပါလာခဲ့သည်။ တဘက်ခြမ်းက ဘေးခုံတွင် ထိုင်နေသော မိသားစုမှ တွန်းလှည်းနှင့် ထည့်လာသော ကလေးငယ်က တလမ်းလုံး အော်ဟစ် ဂျီကျ နေသည်မို့ ငိုက်ရတာ သိပ်တော့ ဇိမ်မကျလှ။ ကလေးက ပါးစပ်ထဲက ချိုလိမ်ကို လွှင့်ပစ်လိုက်၊ အာခေါင်ခြစ်သံနှင့် အော်လိုက် အမျိုးစုံ ဂျီတိုက်နေသည်။ ကလေး အမေက တရှူးရှူးနှင့်တော့ ဟန့်ရှာပါသည်။ သို့သော်လည်း ငြိမ်မသွား။ ပို၍ ပို၍သာ ဆိုးလာလေ၏။ အကြီးမလေး ကတော့ ခပ်ကုပ်ကုပ်လေး ထိုင်နေပြီး မျက်လုံး အ၀ိုင်းသားနှင့် ဟိုသည် ကြည့်လို့။
ဆင်းရမည့် မှတ်တိုင် အရောက်မှာ ခလုတ်နှိပ်ရင်း ထိုင်ခုံမှ ထ၊ ကျောပိုးအိတ်ကို ကျောမှာပြန်ပိုး၊ ဂျင်းအိတ်ကို ပခုံးမှာ စလွယ်သိုင်း၊ ဘီးတပ် သေတ္တာကို လက်ကဆွဲပြီး ကားထဲမှ ဖရိုဖရဲ ဆင်းခဲ့သည်။
လမ်းမပေါ် ခြေအချမှာ ခပ်လှမ်းလှမ်းက လမ်းကလေးကို အမြန် လှမ်းကြည့် မိ၏။ သူ့ကိုတော့ လွမ်းလှပြီလေ။ အတန်ကြာ ကင်းကွာနေခဲ့သော လမ်းကလေးက တိတ်ဆိတ်စွာ တစိမ်းတရံ ဆန်လွန်းနေ သယောင်ယောင်။ ခပ်ကြမ်းကြမ်း တိုက်ခတ် နှုတ်ဆက်လိုက်သော အေးစက်စက် လေပြင်းကြောင့် ကြက်သီး မွေးညင်း ထမိသော်လည်း လမ်းကလေးထဲ ချိုးကွေ့ အ၀င်မှာတော့ နှလုံးသွေးတွေ ပူနွေး လာသလို ရင်ထဲ လှုပ်ရှား ခံစား ရသေး၏။ သူကတော့ဖြင့် မလှုပ်မရှက် ငြိမ်သက်လို့ပါပဲ ။
"၂ ပတ်ပဲ ခွဲရသေးတယ် ... စိမ်းကားသွားပြီလား လမ်းကလေးရေ ... "
ခပ်တိုးတိုး ရေရွတ်မိတော့ အရွက်ကင်းမဲ့ နေသည့် သစ်ပင်တွေက ရယ်မော လှောင်ပြောင် သည့်အလား တလှုပ်လှုပ် တရှားရှား။ လှုပ်ရှား နေသော ထိုသစ်ပင်တွေမှ တပါး အရာအားလုံးက ငြိမ်သက်လျက်။ ဘီးတပ် သေတ္တာနှင့် ကတ္တရာလမ်း ပွတ်တိုက်သံမှ တပါး အခြားသော အသံပလံ များလည်း ကင်းဆိတ်လျက်။
ကွင်းပြင်ကို ဖြတ်တိုက်လာသော လေက စိမ့်နေအောင် အေးသည်။ နားရွက်ဖျားနှင့် လက်ဖျားတွေပင် ထုံကျင် ချင်ချင်။ ခါတိုင်းလို လမ်းလျှောက်ရင်း ဣတိပိသော လည်း မရွတ်မိ၊ ဟေတုပစ္စယော လည်း မရွတ်မိ၊ ခွဲနေရတာ အတန်ကြာနေပြီ ဖြစ်သော ဤလမ်းကလေးကိုသာ တတမ်းတတ ကြည့်မ၀ ဖြစ်နေမိသည်။ လမ်းဘေးဝဲယာ ရှုခင်း၊ စိမ်းလန်းသော မြက်ခင်း ပြင်ကျယ်၊ အရိုးပြိုင်းပြိုင်း သစ်ပင်တန်း၊ ပုံ့ပုံ အုပ်အုပ် ချုံပုတ်ကလေးတွေ၊ ဒါတွေဟာ လမ်းကလေး၏ ဘယ်တော့မှ မရိုးနိုင်သည့် ရှုမြင်ကွင်း တွေပင်။
လျှောက်ရင်း လျှောက်ရင်း နေ၀င်ချိန်ပင် တိုင်ခဲ့လေပြီ။ တလောကလုံးကို နောက်ဆုံး အလင်းရောင်နှင့် နှုတ်ဆက်နေသည့် နေမင်းကြီးကို နောက်ပြန် ငေးမော ကြည့်မိ သေး၏။ နေ၀င်ပြီ ဆိုမှဖြင့် တစတစ အမှောင်ထုက ချဉ်းကပ် လာတော့သည်။ ဒီဘက် ကမ္ဘာခြမ်းမှာ အမှောင်ကျပေမဲ့ တခြား ကမ္ဘာ ဘက်ခြမ်း အတွက် အလင်းရောင် ပေးနိုင်စွမ်း တယ်ဆိုရင် အမှောင်မှာ နေရကျိုး နပ်ပါတယ်လေ ... ဟု စိတ်ထဲက ဆိုမိသည်။
ကျောမှာ ပိုးထားသည့် အိတ်ကလည်း တဖြည်းဖြည်း လေးသည်ထက် လေးလာပြီ။ ပခုံးထက် လွယ်ထားသည့် အိတ်ကလည်း လျောကျလုလု။ တရွတ်တိုက် ဆွဲလာရသည့် သေတ္တာငယ်ကတော့ တချက်တချက် တိမ်းစောင်းလိုက်၊ ပြန်တည့်လိုက်။ ၀ှူး …. လမ်းဆုံးကို ရောက်နိုင်ခဲပါဘိ။ စိတ်ပေါက်ပေါက် နှင့် လျှောက်လာလိုက်တာ ရှေ့တူရူမှ လာသော ကားတချို့ကိုလည်း မရှောင်မိ။ ကားတွေကသာ ကွင်းရှောင် သွားကြသည်။
လျှောက်နေရင်း ရပ်နားလိုက်ချင်ပြီ၊ စိတ်ရော ကိုယ်ပါ နွမ်းလျ လွန်းလှပြီ။ နေ၀င်ရီတရော မှောင်စပျိုးချိန် … တလမ်းလုံးမှာ တယောက်ထဲ ပါလား ဟူသော အသိက စိတ်ထဲမှာ လှိုက်ခနဲ ၀မ်းနည်းလို့ လာသည်။
"အို ... ဒါ ... ၀မ်းနည်းစရာလား ... အားငယ် စရာလား ... တယောက်ထဲ ဆိုတော့ ဘာဖြစ်သေးလဲ။ မောရင် နားပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း လှမ်းရင် လမ်းဆုံးဆိုတာ ရောက်ကို ရောက်မှာပဲ။ အခုလည်း ရောက်တော့မယ် ... အားတင်းထား"
ဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားပေးရင်း တလှမ်းချင်း လျှောက်နေခိုက် ... အနောက်မှ လာသော ကားတစီးက ဘေးနားမှာ ထိုးဆိုက်သည်။
"ဟေးးးးးးး မေ … လာ ... လာ … ကားပေါ်တက်"
လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ကျောင်းက မီနီဘတ်စ်လေး။ ကံအားလျော်စွာ ကားပေါ်မှာ တနေရာစာ လွတ်နေသည်။ ၀မ်းသာ အားရ တံခါးကို ဖွင့်၊ ပစ္စည်းတွေတင်၊ ကားပေါ် တက်လိုက်တော့ ...
"ဟက်ပီးနယူးရီးယား ... မေ ... ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ပျော်ရဲ့လား"
သူငယ်ချင်းများက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ နှုတ်ဆက်ကြသည်။ သူတို့ကို ပြန်လည် နှုတ်ဆက်ရင်း နေရာတကျထိုင်ကာ ကားနောက်ဘက်ကို လည်ပြန် လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ... … … … အကွေ့အကောက် များစွာနှင့် လမ်းငယ် ကလေးက တရိပ်ရိပ် နောက်မှာ ကျန်ခဲ့ရင်း ... မြင်ကွင်းထဲမှ တစစ မှုန်ဝါး ပျောက်ကွယ် သွားလေတော့၏။
၈၊ ဇန်န၀ါရီ၊ ၂၀၀၈
Posted by မေဓာဝီ at 2:15 PM 12 comments
Posted by မေဓာဝီ at 11:06 PM9comments
ကျမရေးခဲ့တဲ့ မြနန္ဒာနှင့် ခရစ်စမတ်ညစာ ပို့စ်မှာ ဇန်န၀ါရီ ၂-ရက်နေ့က အခုလို ကွန်မန့်တခု ၀င်လာပါတယ်။
“မြနန္ဒာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာတပုဒ် ရှယ်ယာလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် လက်ခံနိုင်မလား။ အီးမေးလ်လေး တဆိတ်လောက် ပေးနိုင်မယ် ဆိုရင်ပေ့ါလေ။”
ဒါနဲ့ပဲ ကျမလည်း လက်ခံနိုင်ကြောင်း အကြောင်းပြန်ပြီးတဲ့နောက် အလွန် ကောင်းတဲ့ ရသစာ တပုဒ်ကို ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ စာကောင်းတပုဒ် ဖတ်ရှုရတဲ့အခါ ကိုယ့် မိတ်ဆွေများပါ မျှဝေ ခံစားစေလိုတာကြောင့် စာရေးသူ ထံ ခွင့်တောင်းပြီး ကျမဘလော့မှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဒီစာကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်က ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ရင်ခတ်ပန်း မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၂ မှာ ဖော်ပြခြင်း ခံခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အစက တ၀က်ချင်း ခွဲတင်မလို့ပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ တဆက်တည်းဖတ်မှ ပိုပြီး အရသာရှိမယ် ထင်တာကြောင့် အားလုံးပဲ တခါတည်း တင်လိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး။
အာရီရန် နှင့် မြနန္ဒာ
အာ … ရီရာရန် … ၊ ရီရာရန် … ဟေ ဟေ ဟေ ၀ိုး …
အိုး ၀ို့ ၀ို ၀ိုး … ၊ ၀ို့ ၀ို ၀ိုး … ဟေ ဟေ ဟေ ၀ိုး …
မြေပြင်တခုလုံး သိမ့်သိမ့်တုန်နေသည်။ အသံတွေက ကောင်းကင်သို့ ခုန်တက်ကာ တိမ်တွေကို ထိုးဖောက်သွားသည်။ အသံ လှိုင်းလုံးကြီးက နိမ့်ချည် မြင့်ချည်။ အနီရောင် ပန်းခင်းကြီးကလည်း နိမ့်ချည် မြင့်ချည်။ ကျနော့် ရင်တွေလည်း နိမ့်ချည် မြင့်ချည်။
ရင်ထဲမှ ပွင့်အန်, တကိုယ်လုံးမှ စိမ့်ဖြာ ထွက်ပေါ်လာသော ဟစ်ကြွေးသံ၏ ထုထည်က ကြီးမားလှသည်။ တခဲနက်သော အသံလှိုင်းကြီးသည် အရာ အားလုံးကို ရိုက်ခတ်သွားတော့သည်။
ကျနော် တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစွာ မှင်သက်နေမိသည်။
လူတွေအားလုံး ခြေစုံ ခုန်လျက်၊ လက်ညှိုးလေး ထောင်လျက်၊ သံကုန်ဟစ် လျက်။ ကျနော်သည် ကြည့်နေရင်းပင် ရင်တခုလုံး လှိုက်ဖိုလာသည်။ မွေးညင်းပေါက်များ စစ်စစ်မြည်လာသည်။ ထိုခဏမှာပင် ကျနော့်ကို အသံလှိုင်းကြီးက ပုတ်ချလိုက်တော့သည်။
အသံများအောက်တွင် ကျနော် ပိပြားသွားသည်။ နိမ့်ကျသွားသော အသံလှိုင်း နှင့်အတူ ကျနော် မြေကြီးထဲ နစ်ဝင်သွားသည်။ မြင့်တက်လာသော အသံနှင့် အတူ ကျနော် လေထဲ လွင့်ပျံသွားပြန်သည်။ ကျနော့်တကိုယ်လုံးကို အသံထုက ၀ါးမြိုလိုက်ပြီးနောက် ကျနော်သည် ထိုအသံထုထဲက မြူမှုန် ကလေးတခု ဖြစ်သွားပြန်သည်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်သတိထားမိချိန်တွင် ကျနော်သည် စောစောကလူတွေ လို ဟစ်ကြွေးနေသူ တယောက် ဖြစ်နေတော့သည်။ အာ … ရီရာရန် … ။ ကျနော်နှင့်သူတို့ တသားတည်း ဖြစ်သွားသောအခါ ကျနော်သည် လှိုင်း အပုတ်ခံလိုက်ရသူ မဟုတ်တော့ဘဲ လှိုင်းစီးနေသူ တယောက် ဖြစ်သွားပြန် သည်။
ဘယ်မျှ ခုန်နေမိသည်မသိ၊ ကျနော် တကိုယ်လုံး ချွေးတွေနစ်လာသည်။ ကိုယ့်အသံ ကိုယ်ပြန်၍ မကြားနိုင်ပါဘဲလျက် အသံရှိန်က ကျမသွား။ ပျော်ရွှင် လျက်, တက်ကြွလျက်, လန်းဆတ်လျက်။ ကျနော်အပါအ၀င် လူတိုင်း ကိုယ်စီထံမှ ထွက်ပေါ်လာသော အာရီရန် တေးသံအောက်တွင် ကိုးရီးယား နိုင်ငံတခုလုံး ပျော်ဝင်သွားတော့သည်။
မီးရောင်စုံ ထွန်းထားသော စတိတ်စင်ပေါ်မှ ပေါက်ကွဲထွက်လာသော ရော့ခ် ဂီတနှင့် အတူ အားပါးတရ သီဆိုဟစ်ကြွေးနေပုံမှာ ကြည့်မြင်ရသူ အားလုံး ကို ဖမ်းစားနိုင်လွန်းလှသည်။ သူဆိုသလို အားလုံးဆိုသည်။ သူခုန်သလို အားလုံးခုန်သည်။ အားလုံးသည် တခုတည်းသာ ဖြစ်သည်။ သူတို့အားလုံး ပန်းနီရောင်တီရှပ်တွေ ၀တ်ထားကြသည်။ ပန်းနီရောင် ပုဝါလေးများကို အချို့က လက်မှာပတ်လျက်၊ တချို့က နဖူးမှာပတ်လျက်။ ဆိုးလ်မြို့တော် သည် အနီရောင်စုတ်ပြားကြီးဖြင့် တချက်တည်း သပ်ထားသော ပန်းချီကား ဖြစ်သွားသည်။
သူတို့အားလုံး မကြာမီကျင်းပတော့မည့် ကမ္ဘာ့ဖလားဘောလုံးပွဲကို ကြိုဆို နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ အာရှတွင် ပထမဆုံး ကျင်းပသော ပွဲလည်းဖြစ်၊ အိမ်ရှင် နိုင်ငံအဖြစ် ကျင်းပခွင့်ရအောင် အတော်ကြိုးစားထားရသည်လည်း ဖြစ်၍ ကိုရီးယားတနိုင်ငံလုံး ဘောလုံးအတွက် စိတ်စောနေကြသည်။ လူတွေ အားလုံး ဘောလုံးအတွက်ပဲ ပြောဆိုလှုပ်ရှားနေချိန်ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲအကြို ကာလ လူထုလှုံ့ဆော်မှု အဖြစ် ကျင်းပနေသော စင်တင်ဂီတပွဲတွင် နာမည် ကျော် အဆိုတော်တွေ လူငယ်တွေအားလုံး တက်ကြွစွာ ပါဝင်နေကြသည်။ သူတို့ အားရပါးရ သီဆိုနေသည်က အာရီရန် သီချင်း ဖြစ်သည်။
ကျနော်ရောက်နေသည်က ဆိုးလ်မြို့တော် လမ်းမတခုဖြစ်သည်။ စတိတ်စင် က ဘယ်မှာရှိသလဲ ကျနော်မသိ။ သိလျှင်လည်း သွားလို့ ရနိုင်မည် မဟုတ်။ လမ်းပေါ်မှာ လူတွေက အပြည့်။ ရှုမြင်နေရသည်က ဒစ်ဂျစ်တယ် ဘုတ်ကြီး များမှ တဆင့်သာ ဖြစ်သည်။ ဆိုးလ်မြို့ထဲရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ် ကြော်ငြာဘုတ်ကြီး များအားလုံးတွင် ကြော်ငြာများ မရှိတော့။ ဂီတပွဲကိုသာ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် ပေးနေသည်။ စတိတ်ပေါ်မှာ, လမ်းမပေါ်မှာ, ဒစ်ဂျစ်တယ် ဘုတ်ပေါ်မှာ အာရီရန် တေးသံက မြူးကြွလွင့်ပျံလျက်၊ လူတွေအားလုံးက ခုန်ပေါက်လျက်။ အနီရောင်ပန်းခင်းကြီးကို လေတိုးဝှေ့သလို တယိမ်းယိမ်း တနွဲ့နွဲ့။ ကျနော် လည်း နှင်းဆီ တပွင့် ဖြစ်။
အို … ၀ို ၀ို့ ၀ိုး … ၊ ၀ို့ ၀ို ၀ိုး … ဟေ ဟေ ဟေ ၀ိုး … ၊
အာရီရန် သီချင်းသည် ကိုရီးယား ရိုးရာ ကျေးလက်တေးတပုဒ် ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းရ၍ လူတိုင်းနှစ်သက်သော သီချင်း ဖြစ်သည်။ လူစုလူဝေးနှင့် ပတ်သက်ရသော ကိစ္စတိုင်းတွင် သီဆိုလေ့ရှိသည်။
အာရီရန်သည် ကျေးလက်တေးတပုဒ်ဖြစ်ပြီး မည်သူက မည်သည့်အချိန်တွင် ရေးခဲ့သည်ဟု အတိအကျ မပြောနိုင်။ ဘယ်ကာလက ခေတ်စားခဲ့သည်ဟု မသိနိုင်သော်လည်း ကိုရီးယားလူမျိုးများ၏ ရင်ထဲတွင် စိမ့်ဝင် စွဲမြဲနေသည်က တော့ ကြာလှပေပြီ။ ကျေးလက်တွင် လယ်ယာလုပ်ကိုင်ရင်း, ငါးဖမ်းရင်း, ခရီး သွားရင်း သီဆိုလေ့ရှိကြသည်။ တဦးတည်းလည်း ဆိုသည်။ လူစုလူဝေးနှင့် လည်း ဆိုသည်။ လူထုကြားတွင် ရှင်သန်နေသည့် တကယ့် လူထုတေးသံ ဖြစ်သည်ကတော့ အမှန်။
မူရင်း အာရီရန်သီချင်းမှာ စာကြောင်းလေးကြောင်းသာ ရှိသည်။
“အာရီရန် … အာရီရန်ရေ …
ဆယ်လီ*အရောက်မှာ ဆက်မလျှောက်နိုင်ပြီလေ …”
အာရီရန်ဆိုသည်မှာ တောင်ကို ဖြတ်ကျော်သွားသည့် လမ်းကို တင်စား ခေါ်ဝေါ်သည့် စကားဖြစ်သည်။ လမ်းတခုတည်းကို တိုက်ရိုက် ရည်ညွှန်းသည် မဟုတ်။ ‘ခရီးလမ်း’ ဟု ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။
ဟိုးတချိန်က ဆိုးလ်မြို့အရှေ့ဘက် ဂိတ်ပေါက်ငယ်လေးမှ ထွက်လိုက်လျှင် အာရီရန် တောင်ပေါ်လမ်းသို့ ရောက်သည်ဟု ဆိုထုံးရှိသည်။ ထိုလမ်းကလေး ကို အာရီရန်လမ်းဟု ယူခဲ့ကြသော်လည်း ထိုလမ်းတခုတည်းကို ဆိုလိုသည် ဟုလည်း မပြောသာ။ မြန်မာလို ‘ခရောင်းလမ်း’ ဟုဆိုလျှင် နည်းနည်းနီးစပ် မည်လား မသိ။ အာရီရန်သည် တောင်ပေါ်လမ်း, တောင်ကျော်လမ်း သို့မဟုတ် ခရောင်းလမ်း သို့မဟုတ် ဘ၀လမ်း ဖြစ်သည်။ ရည်မှန်းချက် တခုဖြင့် ဖြတ်သန်းနေသော လမ်း။ မျှော်လင့်ချက်အတွက် လျှောက်နေသော လမ်း။
သီချင်းထဲတွင် ထိုလမ်းကိုပင် လူတယောက်လို သဘောထား၍ ‘အာလုပ်’ ပြုထားသည်။ အာရီရန်။ ပြီးတော့ ထိုလမ်းမှာပင် ငါလျှောက်လှမ်းနေသည်ဟု ဆိုသည်။ ဟုတ်သည်။ မိမိတို့ ဘ၀ကိုယ်စီသည် ခရောင်းတို့ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော လမ်းမဟုတ်ပါလား။ ထိုအခါ မိမိကိုယ်တိုင်သည်ပင် အာရီရန် ဖြစ်သွားတော့သည်။ အာရီရန်သည် မိမိကိုယ်တိုင် ဖြစ်သည်။ မိမိ ကိုယ်တိုင်သည် အာရီရန် ဖြစ်သည်။ မိမိကိုယ်တိုင်ပင် ဖြစ်သော အာရီရန် သည် အပေါင်းအဖော်မပါ တကိုယ်တည်း ဖြစ်သည်။ သူတို့တွေက ကိုယ့်ကို စွန့်ပစ်ခဲ့သည်။ မိမိသည် စွန့်ပစ် ခံခဲ့ရသူ။ သို့ပေမဲ့ စွန့်ပစ်ခဲ့သူတွေက ခရီးတာ တခုမှာ ရှေ့ဆက် မလျှောက်နိုင်တော့။ ရပ်တန့် ကုန်ကြပြီ။
ရိုးစင်းသော သီချင်းစာသားအတွင်းမှာပင် နက်နဲကျယ်ပြန့်သော အဓိပ္ပါယ်တွေ အပုံအပင် ပါနေသည်။ ထိုသီချင်းကို ကိုရီးယားတွေ အလွန်နှစ်သက်ခဲ့ကြ သည်။ အာရီရန်သည် သူတို့ရင်ကို အပန်းပြေရုံ သက်သက် မဟုတ်။ အားမာန် တွေကို ပေးနေသည်။ မျှော်လင့်ချက်တွေကို ပေးနေသည်။ အာရီရန် … ဟု ရင်တွင်းမှ ထုတ်ဖော်လိုက်ခြင်းသည် သူတို့စိတ်ကို အားသစ်လောင်းလိုက် ခြင်းပင် ဖြစ်တော့သည်။
ဤတေးကို ကိုရီးယားလူမျိုးတွေက ဒေသအလိုက် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် သီဆို ခဲ့ကြသည်။ မူရင်းစာသားကို ထပ်မံဖြည့်စွက်၍ ချဲ့ထွင်ထားသော မူကွဲတွေ အများအပြားရှိသည်။ သီဆိုဟန် မူကွဲသည့် တေးသွား အမျိုးမျိုးရှိသည်။ သို့သော် တေးသွားတွေ ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း, စာသားတွေ ဘယ်လို ချဲ့ချဲ့ မူရင်းအနှစ်သာရကတော့ မပြောင်းခဲ့ပါ။
၁၉၂၆ က ကိုရီးယား၏ ပထမဆုံး ရုပ်ရှင်ကားမှာ ‘အာရီရန်’ ဖြစ်သည် ဟု ဆိုပါသည်။ ထိုရုပ်ရှင်မှာ ဂျပန် ကိုလိုနီခေတ်က ရိုက်ကူးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အနုပညာဖြင့် လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထို ဇာတ်ကား၏ အဓိက ဇာတ်ဝင်သီချင်း အာရီရန်ဖြင့် ခေတ်သစ် ကိုရီးယား တို့ကို နိုးကြားစေခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။ ထိုနောက်ပိုင်းတွင် အာရီရန်သည် တော်လှန်ရေးအငွေ့အသက်ကိုပါ ဆောင်ကြဉ်းလာခဲ့သည်။ ဂျပန်ခေတ်က စစ်ထွက်သူတို့သည် အာရီရန်ကို သီဆို၍ စစ်ထွက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ခေတ်အဆက်ဆက် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် သီဆိုခဲ့သော လူထုတေးသံ အာရီရန် သည် ယနေ့ ရော့ခ် ဂီတ ပုံစံဖြင့် ရှင်သန်လျက်ပင် ရှိသေးသည်။
လူမျိုးတိုင်းတွင် ကိုယ်ပိုင် သီချင်း ဂီတတွေ ရှိကြစမြဲဖြစ်သည်။ ထိုတေးဂီတ တို့သည် ရေမြေသဘာဝ လူမျိုး၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်း ဓလေ့စရိုက်ကို တည်မှီ၍ ပေါ်ထွန်းလာကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘယ်ခေတ်က ဘာပေါ်ခဲ့သည်ဟု ပြောနိုင် တာလည်း ရှိမည်၊ မပြောနိုင်တာလည်း ရှိမည်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် တေးဂီတ တခု လူထုရင်ထဲ စွဲမြဲနှစ်သက်နေသည် ဆိုလျှင် ထိုတေးဂီတမှာ ထိုလူမျိုး၏ အသည်းနှလုံးထဲက ထွက်ပေါ်လာသော ကိုယ်ပိုင်အနုပညာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုရမည် ဖြစ်သည်။
လူမျိုးတိုင်းတွင် သားချော့တေး ရှိသည်။ ကျေးလက်တေးခေါ် လုပ်ငန်းခွင်နှင့် စပ်ဆိုင်နေသည့် ဂီတများရှိသည်။ ဘောင်းဘီဝတ် ဦးထုပ်ဆောင်း မြင်းစီးကာ နွားကျောင်းသည့် ကောင်းဘွိုင်တွေ၏ ကန်းထရီးသီချင်းတွေ ရှိသလို ပုဆိုးတိုတို ရောင်တစောင်းနှင့် မြန်မာနွားကျောင်းသားတို့၏ ရိုးရာသီချင်းများ လည်းရှိပါသည်။ မြန်မာတွင် မောင်းထောင်းတေး၊ ကောက်စိုက်တေး၊ လှေတော်သံ၊ ဗုံကြီးသံ၊ ဗျောသံ စသည့် လူထုတေးသံများ ရှိကြပါသည်။ ထို တေးသံများသည် မြန်မာလူမျိုး၏ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့စရိုက်များမှ ဖြစ်ထွန်းလာသော လူထုအနုပညာများ ဖြစ်ကြပါသည်။
ခေတ်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း လူထုအားလုံး၏ အသည်းနှလုံးကို ဆွဲဆောင်နိုင်သည့် တေးတပုဒ်တော့ လူမျိုးတိုင်းတွင် ရှိကြစမြဲ ဖြစ်သည်။ ကိုရီးယားတွေက အာရီရန်ကို သူတို့၏ အနှစ်သက်ဆုံး လူထုတေးသံဟု ဆိုသည်။ မြန်မာတို့၏ အနှစ်သက်ဆုံး လူထုတေးသံကကော ဘာဖြစ်မလဲ။
ကျနော်ကတော့ ‘မြနန္ဒာ’ ဟု ဖြေချင်ပါသည်။
လူတွေနှုတ်ဖျားမှာ မြနန္ဒာဟု ခေါ်နေကြတာကိုက လူထုတေးသံ ဖြစ်နေခြင်း ၏ လက္ခဏာတရပ် ဖြစ်နေပါသည်။ အကြောင်းမှာ ထိုသီချင်း၏ ခေါင်းစဉ် အမှန်မှာ ‘မန်းတောင်ရိပ်ခို’ ဖြစ်နေ၍ ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာလူငယ် တယောက် ကို မန်းတောင်ရိပ်ခို ရသလားဟု မေးလျှင် မရဘူးဟု ဖြေပါလိမ့်မည်။ မြနန္ဒာ ကောဆိုလျှင် ဒါတော့ ရတာပေါ့ဟု ဖြေပါလိမ့်မည်။ မန်းတောင်ရိပ်ခိုကို သူတို့ မသိ။ မြနန္ဒာကို သိသည်။
အကယ်၍သာ သီချင်းရေးသူ ဆရာမြို့မငြိမ်း ရှိနေသေးလျှင် သူ့သီချင်း၏ စာသားကို ရပါလျက် ခေါင်းစဉ်အမှန်ကို မသိရကောင်းလားဟု စိတ်ဆိုးနေ လိမ့်မည်ဟု ကျနော် မထင်။ ကျိတ်၍ ၀မ်းသာကောင်း သာနေဦးမည် ထင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဆရာမြို့မငြိမ်း အမှန်တကယ်ပေးလို သည့် ခေါင်းစဉ်အမှန်မှာ ‘မြနန္ဒာ’ ဖြစ်နေ၍ ပင်။
မြို့မငြိမ်း ထိုသီချင်းကို မရေးမီ နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်က ‘မြနန္ဒာ’ ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သီချင်းတပုဒ်ရေးခဲ့ပြီး ဖြစ်၍ ဆရာငြိမ်းက မန်းတောင်ရိပ်ခိုဟု အမည်တပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုသီချင်း လူထုထဲ ပြန့်သွားသောအခါ လူထုက မြနန္ဒာ ဟုပင် အနွတ္ထသညာ ပြုလိုက်တော့သည်။
စစ်စင် မြနန္ဒာ သီချင်းမှာ မန္တလေးခေတ်ဦးက ပေါ်ခဲ့သည့် ကျေးလက်တေး တပုဒ်ကို အခြေခံရေးဖွဲ့ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
မန္တလေးမြို့ကို တည်သောအခါ မန္တလေးတောင်နှင့် ယင်းတောင်ခြေရှိ နန္ဒာ ကန်မှာ မြို့၏ အင်္ဂါရပ်များသဖွယ် ဖြစ်လာသည်။ တောတောင်ကိုချစ်သော မြန်မာတို့ကို တောရိပ်တောင်ရိပ်က ဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ မြို့သစ်သည် လွင်တီးခေါင်မဟုတ်။ တောတောင်တို့ဖြင့် စိမ်းစိုသည်။ ရေတွင်းရေကန်တို့ဖြင့် ပြည့်စုံသည်။ နန္ဒာကန်လည်း ရှိသည်။ ဒီမြို့မှာနေလျှင် စိမ်းစိုသာယာ စိတ်ချမ်းသာမည်။ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းရှိမည်။ သို့ဆိုလျှင် အသက်ရှည်မည်။ ဤ သီချင်းသည် မန္တလေးခေတ်ဦးက လူထုကို အလွန်ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သော သီချင်း ဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မည်။
မန္တလေးခေတ် လွန်သောအခါ ထိုတေးကိုပင် အခြေခံ၍ နန်းတော်ရှေ့ ဆရာတင်က သီချင်းရေးသည်။ ထိုသီချင်းသည် သူ့ခေတ်အလျောက် နာမည် ထွက်ခဲ့သော်လည်း လူထုသီချင်းတော့ မဖြစ်ခဲ့။ ဆရာငြိမ်း၏ သီချင်း ထွက်ပေါ်လာသောအခါ လူထုသီချင်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ရွှေမန်းတောင်ရိပ် တူတူခိုသူ ပျိုဖြူဆွေရယ်
အတိတ်ကောင်းယူမယ် နှစ်ဦး သင်္ကြန်တော်ဝယ်”
ဆရာငြိမ်းက မြနန္ဒာကို မန္တလေးမြို့ဘွဲ့ သက်သက် မရေး။ မြန်မာတို့ အကြိုက် သင်္ကြန်ဘွဲ့အဖြစ် ရေးသည်။ နှစ်သစ်ကူးချိန် အတာသဘင်မှာ မန်းတောင်ရိပ်သို့ ချစ်သူခင်သူတို့နှင့် အတူတူ သွားခဲ့ကြပုံကို ရေးသည်။ အခါ ကောင်းမှာ ပျော်ရွှင်ရပုံကို ရေးသည်။ ထိုအရေးအဖွဲ့ကြောင့်ပင် လူထုတေးသံ ဖြစ်ခဲ့ရသည်ဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။
ခေတ်အဆက်ဆက် သင်္ကြန်အခါတိုင်း မြနန္ဒာ မပါလျှင် သင်္ကြန်မဖြစ်လောက် အောင် ဖမ်းစားနိုင်လွန်းလှသည်။ သင်္ကြန်အခါ စင်ပေါ်တက်ရသူ နာမည်ကျော်တိုင်း မြနန္ဒာမဆိုဘူးသူ မရှိ။ မြနန္ဒာနှင့် မကဘူးသူ မရှိ။ ရော့ခ် တွေ မက်ဒဲလ်တွေ ခေတ်ရောက်လာတော့လည်း မြနန္ဒာက ပျောက်မသွား။ ရော့ခ်သမားများကိုယ်တိုင် မြနန္ဒာကို ဟစ်နေကြသည်မှာ အထင်အရှား။
လူစုလူဝေးဖြင့် အားပါးတရ ဆို၍ က၍ ရသော မြနန္ဒာသည် သင်္ကြန်နယ်ပယ် ကိုကျော်၍ မြန်မာတို့၏ ပွဲလမ်းသဘင်တိုင်းသို့ ပေါက်ရောက်လာတော့သည်။ လူစုစုဖြင့် ပျော်စရာ ရွှင်စရာ လုပ်ကြပြီဆိုလျှင် မြနန္ဒာက အလိုလို ပါလာရစမြဲ ဖြစ်တော့သည်။ ယခုဆိုလျှင် နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာတို့၏ ပွဲလမ်းသဘင် တိုင်းတွင်လည်း မြနန္ဒာက အပိတ်သီချင်းအဖြစ် နေရာယူထားသည်။
မြနန္ဒာသည် မြန်မာတို့၏ ရင်ထဲမှာ တကယ်စွဲနေသည်ကတော့ အမှန်ပင်။
လူထုတေးသံတိုင်းတွင် ထိုလူမျိုး၏ စိတ်ကူးစရိုက်တို့ ကိန်းအောင်းနေမြဲ ဖြစ်သည်။ အလုပ်ကို ချစ်တတ်သော, စွဲစွဲမြဲမြဲ လုပ်တတ်သော ရည်မှန်းချက် အတွက် စိတ်ဓာတ် ပြင်းထန်သော ကိုရီးယားလူမျိုးတို့၏ စရိုက်ကို အာရီရန် သီချင်းတွင် တွေ့မြင်နေရသည်။ တောတောင်ရေမြေတို့က ခက်ထန် ကြမ်းတမ်းလျက် ထိုအခက်အခဲတို့ကို အမြဲတစေ ရင်ဆိုင်နေရတတ်သည့် ကိုရီးယားတို့၏ သဘာဝကို အာရီရန်က ဖွင့်ဆိုပြထားသည်။
ရေမြေတောတောင်၏ နေချင့်စဖွယ် လှပသာယာသည့် မြန်မာ့သဘာဝကို မြနန္ဒာတွင် တွေ့မြင်နေရသည်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်သော ဓလေ့စရိုက်ကို မြနန္ဒာက ခံစားရရှိစေသည်။ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဖြင့် အသက်ရှည်ရှည် နေချင်သော မြန်မာတို့၏ စိတ်ခံစားမှုကို မြနန္ဒာက ပုံဖော်ပြ ထားသည်။ ပြီးတော့ အဖော်အပေါင်းကို ခင်တွယ်တတ်၊ သံယောဇဉ်ကြီးတတ် သော မြန်မာ့ဓလေ့စရိုက်ကိုလည်း ထင်လင်းစွာ ခံစားရရှိစေသည်။
ကိုရီးယားတို့၏ ရည်မှန်းချက်တွေ၊ အောင်မြင်မှုအတွက် လိုလားတောင့်တမှု တွေက ရော့ခ်ဂီတနှင့်အတူ ပေါက်ကွဲထွက်လာပုံမှာ သိမ့်သိမ့်တုန်စရာ။ အဲဒါ သည်ပင် ကိုရီးယားဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုနေသယောင်။ အေးအေးလေးနှင့် မြူးကြွသောတေးသံ ဖျတ်ဖျတ်လတ်လတ်ရှိသည့် ဒိုးသံနှင့်အတူ မြနန္ဒာ သီချင်းမှာ မြန်မာ့ပင်ကိုယ်ဟန်ပင် ဖြစ်တော့သည်။ ခြေလှုပ် လက်လှုပ် လက်ခုပ်လက်ဝါးတီးကာ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဟစ်အော်နေတတ်ပုံကပင် မြန်မာဟု မပြောဘဲ သိနေစေတော့သည်။
သို့ရာတွင် တခါတရံတော့ ကျနော့်ရင်ထဲမှာ ထိထိခိုက်ခိုက် ခံစားမိသည်။
ကျနော်တို့ဆီမှာ မြနန္ဒာကို ဆိုရ ကရသည်က ပုံစံခွက်ကြီးနှင့်ဖြစ်သည်။ တူညီဝတ်စုံဝတ် အဖွဲ့များက အကွက်ချထားသည့်အတိုင်း နေရာယူရသည်။ စည်းချက်အတိုင်းမှန်အောင် ကနေရသည်။ ကနေသူတွေ လိုက်မဆိုရ။ တကယ် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကချင်သူတွေက ဟိုးနောက်မှာ။ သူတို့ကို မျက်လုံးနီများက အချိန်ပြည့် စောင့်ကြည့်နေသေးသည်။ လူတွေ တပျော်တပါး သီဆို ကခုန်နေကြသည်ဟု တီဗီရိုက်ကောင်းအောင် ပြင်ဆင် စီမံထားမှုကြောင့်ပင် မြနန္ဒာသည် လူထုရင်မှာ လျော့ပါးလာရတော့သည်။ လူထုပစ္စည်းကို မိမိတံဆိပ်တပ်၍ ကိုယ်တဦးတည်း မူပိုင်လုပ်လာသောအခါ လူထုသည် မြနန္ဒာကို စွန့်ပစ်ချင်လာတော့သည်။
တကယ်တော့ မြနန္ဒာတွင် ဘာအပြစ်မှ မရှိ။ ကျနော်တို့က မြနန္ဒာကို ချစ်သလို မြနန္ဒာကလည်း ကျနော်တို့ကို ချစ်နေမည်သာ ဖြစ်သည်။ မြနန္ဒာသည် မန္တလေးမြို့ဘွဲ့ ဒေသတခုတည်းအတွက် ကွက်ကွက်လေးဟု ကျနော်က မထင်။ မြနန္ဒာသည် သူကဲ့သို့ သာယာလှပသော ရေမြေတောတောင်တို့နှင့် ပြည့်စုံသည့် မြန်မာပြည်ကြီးဟု ကျနော်က ခံစားမိသည်။ မန်းတောင်ရိပ်မှာ အတူခိုမည့် ပျိုဖြူဆွေတို့မှာ ကျနော်တို့၏ ညီနောင်သားချင်းတွေ ကျနော်တို့ ပြည်သားတွေဟု ကျနော်က မြင်ယောင်မိသည်။ ကျနော်တို့ အတိတ်ကောင်း တွေကို အတူတူ မျှော်လင့်နေကြသည်။ အတိတ်ကောင်းတွေကို တကယ် လိုချင်မိပါသည်။ ကျနော်တို့၏ နှစ်ကူးတွင် ပျော်ခင်းတွေ တကယ်သာချင်လှ ပါသည်။
လူထုရင်ထဲမှ မြနန္ဒာတေးသံသည် တကယ်ပင် လွင့်ပျံနေစေချင်ပါသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ မြနန္ဒာ သီချင်းသံကြားလျှင် ကျနော်ပျော်ပါသည်။
ကိုရီးယားတွေက မိမိတို့ရင်ထဲက သီချင်းကို လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ အားပါးတရ သီဆို ခုန်ပေါက်နေပုံကို ကြည့်ရင်း ကျနော်ကိုယ်တိုင်ပင် သီဆို ကခုန်ခဲ့ မိသည်။ ထို့အတူ လွတ်လပ်ပျော်ရွှင် အေးငြိမ်းစွာ မြနန္ဒာကို အနှောင်အဖွဲ့ ကင်းလွတ်စွာ ဟစ်ကြွေးကခုန်နေသည့် မြန်မာလူထုကြီးကို ကျနော် မြင်ယောင် ကြည့်မိသည်။ ထိုအခါ ကျနော်တို့၏ မြနန္ဒာကလည်း ကြားရသူ တိုင်းကို ကြည်နူးနှစ်သက်စေနိုင်မည်ဟု ကျနော် ယုံကြည်မိပါသည်။
မြန်မာတွေ ဘယ်ကိုပဲ ရောက်ရောက်၊ ဘယ်မှာပဲနေနေ ထိုနေရာ၌ မြနန္ဒာ သီချင်းသံ လွင့်ပျံနေမည် ဆိုလျှင် မြန်မာတို့ ရှင်သန်နေသေးသည်ဟူသော နိမိတ်ကို ဆောင်နေသေးသည်ဟု ခံစားမိတိုင်း ကျနော့်ရင်တွင် ပီတိလှိုင်း တခုက လှုပ်ခတ်လာတတ်သည်။
ရင်ခတ်ပန်း မဂ္ဂဇင်း (အမှတ်-၂)
ဒီစာကို ကျမဘလော့မှာ ဖော်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက် စာရေးသူ ဆရာ ၀င်းပေါ်မောင် ကို အထူးကျေးဇူး တင်ပါကြောင်း … ။
၆၊ ဇန်န၀ါရီ၊ ၂၀၀၈
(* ဆယ်လီ = နှစ်မိုင်ခွဲခန့် အကွာအဝေး၊ လီ = ကိုရီးယားရိုးရာ အကွာအဝေး ယူနစ်)
Posted by မေဓာဝီ at 12:42 PM6comments
မနေ့က ဦးရီးတော် အိမ်က မပြန်ခင် ဓမ္မစကြာနဲ့ အနတ္တလက္ခဏသုတ် နှစ်စောင်တွဲ စာအုပ် ဟောင်းဟောင်းနွမ်းနွမ်းလေး ဧည့်ခန်းထဲမှာတွေ့လို့ လှန်လှော ဖတ်ကြည့်တော့ အဘိုးရဲ့ စာအုပ်ကလေး ဖြစ်နေပါတယ်။ အဘိုးက သူ့စာအုပ်မှန်သမျှမှာ နာမည်နဲ့ လိပ်စာ အမြဲ ရေးထိုးလေ့ ရှိတယ်။ စာဖတ်ပြီးတိုင်းလည်း ဘေးနားမှာဖြစ်ဖြစ် နောက်ဘက် စာမျက်နှာ အလွတ် တွေမှာ ဖြစ်ဖြစ် notes လေးတွေ ရေးမှတ်လေ့ရှိတယ်။ အဲဒီစာအုပ်ကလေးရဲ့ နောက်ဘက်ကို လှန်ကြည့်တော့ ထင်တဲ့အတိုင်း အဘိုး လက်ရေးနဲ့ မှတ်စုလေးတွေ ရေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ကျမရဲ့ အဘိုး (အမေ့ အဖေ) ဟာ ကျမတို့ကို လူတလုံး သူတလုံး ဖြစ်အောင် ပျိုးထောင် ပေးခဲ့သူ ကျေးဇူးရှင် တဦးဆိုရင် မမှားပါဘူး။ အဘိုး အသက် ၅၀ ကျော် အရွယ်မှာ အဘွား ဆုံးပါးသွားခဲ့ပေမဲ့ အိမ်ထောင်သစ် ထပ်မထူဘဲ ရဟန်းဝတ်ခဲ့တာ ပျံလွန်တော် မူသည်အထိပါပဲ။ ကျမတို့ ငယ်ငယ်ထဲက အဘိုးနဲ့အတူနေ၊ အဘိုးရဲ့ ဝေယျာဝစ္စတွေလုပ်၊ အဘိုး သင်ပေးသမျှ လောကီ လောကုတ် ပညာရပ်တွေ သင်ယူနာကြားရင်း အဘိုး ပျံလွန်တော်မူတဲ့အထိ အနီးကပ် နေခဲ့ရတယ်။ ခု အဘိုးမရှိတော့တာ နှစ်ပေါင်း များစွာ ကြာတဲ့တိုင် အဘိုး အရိပ်၊ အဘိုး အငွေ့အသက်နဲ့ ကင်းပြီး နေလို့ မရသေးပါဘူး။
အဘိုးလက်ရေးနဲ့ စာလေးတွေကို ကြည့်ပြီး အဘိုးကို သတိရတာနဲ့ အဘိုးမှတ်စုကို ကျမ ဘလော့မှာ အမှတ်တရ တင်လိုက်ပါတယ်။
*** အန္ဓဘူတော အယံလောကော - လူလောက၊ နတ်လောက၊ ဗြဟ္မာလောက ကြီးက (အရိယာများမှတပါး) အမိုက် လောကကြီး အကန်းလောကကြီးပါ။
သမ္မာဒိဋ္ဌ အစစ်မှန်ဆုံး ဖြစ်ဖို့ကတော့ ရင်ထဲမှာ မဂ်ကို ကျမှ မကွေ့ မကောက် ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး အမှန်လမ်းကြီး ရောက်ပြီးသကာလ နိဗ္ဗာန်ကို ဖြောင့်ဖြောင့် သွားတော့မယ်။
အဲဒီမဂ်ကို မရသေးသမျှ ပုထုဇ္ဇနော ဥမ္မတကော - အရူးတွေချည်းပဲ။ ပုထုဇ္ဇနော အန္ဓော - အကန်းတွေချည်းပဲ။ ပုထုဇ္ဇနော ဗာလော - အမိုက်တွေ ချည်းပဲ။
လူ့ပြည် ငရဲပြည် နတ်ဗြဟ္မာပြည်များသို့ ဘယ်သူမှ မပို့ဘူး၊၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပို့ကြသည်။
ဘယ်သူမပြု မိမိမှု၊ အတ္တာဟိ အတ္တနော နာထော - ကောဟိနာထော ပရောသိယာ - ဘုရားရှင်တော်က နှုတ်ဖော် ဟောကြားထားတယ်။ မိမိသာလျှင် မိမိ အားကိုးရာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတပါးသည် မိမိအားကိုးရာ မဟုတ်ဘူး။
ကိုယ့်ကိုယ်မှာ ဘာရှိသလဲ၊ ရုပ်နှင့် နာမ်ပဲရှိတယ်။ ရုပ်က ဘာမှ မသိတတ် ဘူး။ တရားအားထုတ်တာက နာမ်၊ ဒီနာမ်ကို အားကိုးရမယ်၊ ရိုးရာ နာမ် မဟုတ်ဘူး၊ အားမကိုးရဘူး။ ဒီနာမ်ကို ဘုရားပေးတဲ့ ဉာဏ်ကပ်ပြီး အားကိုး ရမယ်။
ကမ္မာ ၀ိပါကာ ၀တ္တန္တိ
၀ိပါကော ကမ္မ သမ္ဘဝေါ။
ကမ္မာ ပုနဗ္ဘဝေါ ဟောတိ၊
ကမ္မာ-ကုသိုလ်ကံ အကုသိုလ်ကံ ဆိုတဲ့ စေတနာ ၂-ပါးကြောင့်၊ ၀ိပါကာ - သုံးဆယ်တ၀ ဘုံလောကကြီးထဲမှ လူခန္ဓာ, နတ်ခန္ဓာ, ဗြဟ္မာ့ခန္ဓာ ခေါ်ကြတဲ့ ရုပ် နာမ် နှစ်ပါး အကျိုးတရားတို့သည်၊ ၀တ္တန္တိ - ဖြစ်ပေါ်၍ နေကြရကုန်လေ သတည်း။
၀ိပါကော - ၃၁ ဘုံ လောကကြီးမှာ လူ နတ် ဗြဟ္မာရယ်လို့ အခေါ်ခံပြီး သကာလ အိုကောင် နာကောင် သေကောင်ခေါ်တဲ့ ဤအကျိုးတရား ဖြစ်တဲ့ ရုပ် နာမ် နှစ်ပါးသည်။ ကမ္မ သမ္ဘဝေါ - မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် လွန်ခဲ့သော အတိတ် ဘ၀တွေက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ် အကုသိုလ်ကံကြောင့် ဖြစ်ပေါ်၍ နေပါ၏။ ကမ္မာ - ကုသိုလ် အကုသိုလ် အကြောင်းတရားကြောင့်၊ ကမ္မာ - မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်နှုတ်စိတ် ၃-ပါးဖြင့် နေ့စဉ် ပြုလုပ် အားထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ ကုသိုလ် အကုသိုလ် စေတနာ (၀ါ) ကုသိုလ် အကုသိုလ် ကံ ၂-ပါးကြောင့်။ ပုနဗ္ဘဝေါ - နောင်ဘ၀သစ် တခုသည်။ ဟောတိ - ဖြစ်ပေါ်၍ လာ၏။ ဧ၀ံ - ဤ ယခု ပြောဆိုပြီးခဲ့သည့် အတိုင်း ရုပ်လောက နာမ်လောက ဆိုတဲ့ ဤ လောက ကြီးသည်။ ပ၀တ္တတိ - ကြောင်းကျိုးတွေ ဆက်၍ ဖြစ်ပျက်ကာ နေရလေတော့ သတည်း။
*** အဘိုးရဲ့ မှတ်စုကတော့ ဒီမျှ ပါပဲ။ အဘိုးရဲ့ ပုံကို ဦးရီးတော် ဘုရားခန်းထဲမှာ တွေ့လို့ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ယူလာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ နောက်နောင် ကြုံကြိုက်ရင် အဘိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပို့စ်တွေ တင်ချင်ပါသေးတယ်။ ဒီနေ့ တော့ ဒါလောက် ပါပဲ … ။
၅၊ ဒီဇင်ဘာ၊ ၂၀၀၈
Posted by မေဓာဝီ at 6:17 PM3comments
“သစ္စာ” ဆိုတာ မှန်ကန်ခြင်း … တဲ့။ မှန်သော စကားကို ဆိုခြင်းဟာ သစ္စာ … လို့ ဆိုကြတယ်။ သစ္စာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘုရားဟော ဇာတ် နိပါတ်တော်တွေ၊ အဖြစ်အပျက်တွေ အများကြီး ဖတ်ခဲ့ မှတ်ခဲ့ နာကြားခဲ့ ဖူးပါတယ်။ အဲဒီထဲကမှ ကျမ စိတ်ထဲ စွဲနေတာကတော့ … ဘုရားလောင်း ငုံးမင်း ဇာတ်တော် ပါပဲ။
ဘုရားလောင်း ငုံးမင်းဟာ အဟိတ် တိရစ္ဆာန်ပင် ဖြစ်လင့်ကစား မှန်သော စကားကို ဆိုပြီး သစ္စာ ပြုတာကြောင့် တဟုန်းဟုန်း တောက်လောင် နေတဲ့ သက်မဲ့ တောမီးကြီးတောင် ငြိမ်းသွားခဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ ၀ဋ္ဋသုတ် ဇာတ်တော်ကို အားလုံး သိပြီး ဖြစ်မှာပါ။ ကျမ ပရိတ်ရွတ်တဲ့ အခါတိုင်း ၀ဋ္ဋသုတ် ရောက်ရင် မြတ်စွာဘုရားရဲ့ သစ္စာပါရမီတော်ကြီးကို အလွန်ကို ကြည်ညို မိပါတယ်။
ကြုံကြိုက်လို့ ၀ဋ္ဋသုတ် မြန်မာပြန်ကို ဖော်ပြလိုက်ပါရစေ။
လောက၌ သီလတရား, သစ္စာတရား, စင်ကြယ်သည်၏ အဖြစ်, မေတ္တာ, ကရုဏာ တရားများ ရှိကြ၏။ ထို တရားများတွင် ပါဝင်သော သစ္စာတရားဖြင့် ထူးမြတ်သော သစ္စာဆိုမှုကို ငါပြုပေတော့အံ့။
ငါသည် တရားတော်၏ အစွမ်း အာနုဘော်ကို ဆင်ခြင်ပြီးလျှင် ရှေးအတိတ် က ပွင့်တော်မူကြကုန်သော ဘုရားရှင်တို့ကို အောက်မေ့လျက် သစ္စာ၏ အစွမ်းကို အားကိုးပြုကာ သစ္စာဆိုမှု ပြုခဲ့ပေပြီ။
ငါ့အား အတောင်များ ရှိနေ၏၊ ပျံကား မပျံနိုင်။ ခြေထောက်များ ရှိနေ၏၊ သွားကား မသွားနိုင်။ ငါ့အမိအဘတို့လည်း အသက်ဘေးကြောင့် ရှောင်ပြေး ထွက်ခွါ ကြကုန်ပြီ။ အို … တောမီး … ပြန်၍ လှည့်သွား ရှောင်ရှားပါလေ။
ငါဘုရားသည် သစ္စာဆိုမှု ပြုအပ်သည် ရှိသော် ပြုသည်နှင့်တပြိုင်နက် မီးသည် ရေသို့ ရောက်သော် ငြိမ်းအေးရသကဲ့သို့ ကြီးမားသော အရှိန်အလျံ ရှိသော တောမီးသည် တဆယ့်ခြောက်ပယ်စာ အကွာအဝေးတိုင်အောင် ရှောင်ကွင်း ငြိမ်းအေး လေသည်။ ငါ၏ သစ္စာနှင့် တူသော တရားကား မရှိတော့ပေ။ ဤသစ္စာမှုသည် ငါဘုရား၏ အထွတ်အထိပ် ရောက်လာရသော သစ္စာပါရမီတော်ပင် ဖြစ်တော့သည်။
အခု … ဒီနေ့ ဒီရက်လို ကျမတို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ (၆၀) နှစ်ပြည့် လွတ်လပ်ရေး နေ့ အခါသမယမှာ … ကျမလည်း ၀ဋ္ဋသုတ်ကို အကြောင်းပြုလို့ ကဗျာတပုဒ် ရေးကာ သစ္စာပြု ဆုတောင်း ချင်ပါတယ်။
ကျမ ဆိုတဲ့ သစ္စာ မှန်ကန်ပါက … …. …. …. …. …. ။
သစ္စာ … ဆုတောင်း
ဤသို့ ကြားနာ ခဲ့ရသည်။
အတောင်ရှိပါလျက် ... အပျံခက်၏။
ခြေရှိပါလျက် ... အသွားခက်၏။
ငါ့၌ ဘယ်မှာ အားကိုးရာ မရှိ
ဤသည့် သစ္စာ မှန်ကန်ပါက
ကင်းပတောမီး ငြိမ်းစေသတည်း ...”
စွမ်းအား ရှိလျက် … လုပ်ဆောင်ခက်၏။
ဉာဏ်ရှိပါလျက် … ကြံစည်ခက်၏။
ပါးစပ်ရှိလျက် … ထုတ်ဖော်ခက်၏။
ခြေရှိပါလျက် … အသွားခက်၏။
နားများရှိလျက် … အကြားခက်၏။
မျက်စိရှိလျက် … အမြင်ခက်၏။
ပန်းတိုင်ရှိလျက် … အလှမ်းခက်၏။
ဤသည့် သစ္စာ … မှန်ကန်ပါက
ငါတို့ ပြည်သား လူအများ၏
ရရန်တောင်းဆု … သစ္စာပြုပါ၏ … ။
၄၊ ဇန်န၀ါရီ၊ ၂၀၀၈
(မြန်မာပြည်၏ ၆၀-နှစ်ပြည့် လွတ်လပ်ရေးနေ့သို့ … )
Labels: ကဗျာ, ဘာသာရေး, သမိုင်းဝင် နေ့ရက်များ
Posted by မေဓာဝီ at 10:11 PM 11 comments
ညက အိပ်ရာဝင်တာ ညဥ့်နက်သွားလို့ မနက်အိပ်ရာထ နည်းနည်း နောက်ကျခဲ့တယ်။ မနက်စာ စားပြီး ဦးရီးတော်နဲ့အတူ ရွာနီးချုပ်စပ်ကို ခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။
အနိမ့်အမြင့် လမ်းတွေက သာယာလွန်းတယ်။ ကားလေးက တောင်ကြားထဲ ရောက်သွားလိုက် တောင်ပေါ် ရောက်သွားလိုက် ...။ တောင်ခိုးတွေက ဝေ ... လို့။ အပြင်မှာ ၇ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ရှိတယ်လို့ ကားရဲ့ ဒိုင်ခွက်ထဲမှာ ညွှန်ပြနေတယ်။ ကားထဲမှာတော့ ၁၈.၅ ဒီဂရီ တဲ့။
ဖွင့်ထားတဲ့ Adam Willams ရဲ့ သီချင်းက Killing me softly with her song တဲ့။ ဦးရီးတော်က ကားမောင်းနေရင်း သီချင်းကို လိုက်ညည်းနေလေရဲ့။ Coalbrookdale ဆိုတဲ့ ကျေးရွာလေးကို ရောက်တော့ သွားချင်တဲ့ နေရာမှာ ကားရပ်စရာကမရှိ။ ဒါနဲ့ လှည့်ပတ်ရှာရင်း ခပ်ဝေးဝေး တနေရာမှာပဲ ကားကိုရပ်ပြီး လမ်းလျှောက်ခဲ့ရတယ်။
သွားချင်တာက အဲဒီတံတားဆီကိုပါ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပထမဆုံး သံနဲ့လုပ်တဲ့ တံတား ... နာမည်က Iron Bridge တဲ့။ River Severn ပေါ်မှာ ဖြတ်ပြီး ၁၇၇၉ ခုနှစ်က တည်ဆောက်ထား တယ်လို့ သိရပါတယ်။ River Severn ဟာ မြစ်လို့သာ ဆိုတယ် ကျမတို့ဆီက ချောင်းသာသာပါပဲ။ မြစ်ရေကတော့ တဝေါဝေါစီးဆင်းလို့။
ဒီလိုနေ့ရက်မျိုးဆိုရင် လူနည်းမယ်ထင်ပြီး တူဝရီး နှစ်ယောက် လာခဲ့ကြတာ။ ရောက်ခါစက တံတားပေါ်မှာ လူတွေအများကြီးပဲ။ ပြန်ခါနီးမှာတော့ လူတွေလည်း နည်းသွားပါပြီ။
ဒါကတော့ Iron Bridge ရဲ့ ပန်းချီကားပုံပါ။ ၁၇၈၀ ခုနှစ်က ပန်းချီဆရာ ၀ီလျံ ရေးဆွဲခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။
သံတံတားက အပြန် Bridge North ဆိုတဲ့ ရှေးဟောင်း မြို့ကလေးဆီ ခရီးဆက်ခဲ့ကြတယ်။ တောင်ပေါ် မြို့ကလေးပေါ့။ မြို့ထဲမှာ လမ်းတွေကလည်းဟောင်း၊ အဆောက်အဦတွေကလည်း ဟောင်းလို့ ကိုယ်တိုင် ရှေးခေတ်ကို ရောက်သွားသလိုပါပဲ။ အဟောင်းတွေ အားလုံး မပျက်စီးအောင် ထိန်းသိမ်း နိုင်တာ ဂုဏ်ယူစရာပဲ။
တောင်ပေါ်ကနေ ကြည့်နေရင်း မီးခိုးတလူလူနဲ့ ရထားတစီး ခုတ်မောင်းလာတာ မြင်ရတယ်။ ရှေးခေတ်က ပြေးတဲ့ ကျောက်မီးသွေး ရထားကြီးတဲ့။ ခုတော့ အပျော်စီး ရထား အဖြစ် ပြေးဆွဲ နေတာပါ။ တခါစီး ပြား ၉၀ နဲ့ တောင်ပေါ် တောင်အောက် ပြေးတဲ့ ရထားကလေးလည်း ရှိသတဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့က ပိတ်ထားလို့ မစီးခဲ့ရပါဘူး။
ဒီ ဘုရားကျောင်းက ၁၆ ရာစု လောက်က တည်ဆောက်ခဲ့ တာလို့ သိရပါတယ်။ ဒီ့ထက် ရှေးကျတဲ့ အေဒီ ၆၀၀ ကျော်လောက်က Castle ကြီးကတော့ တပိုင်းတစ ပြိုကျ နေပါတယ်။ အဲဒီဝင်းထဲလည်း ၀င်လို့မရဘူး ပိတ်ထားပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဟိုဟို သည်သည် လျှောက်ကြည့်ပြီး မမှောင်ခင် အိမ်ကို ပြန်ခဲ့ကြတယ်။
ကားလေးက တရိပ်ရိပ်ပြေးလို့ မြို့လေးတွေက အနောက်မှာ ကျန်၊ အိမ်ကို ပြန်မရောက်ခင် တောင်စွယ်မှာ နေကွယ်သွားခဲ့ ပြီ ... ။
၂၊ ဇန်န၀ါရီ၊ ၂၀၀၈
(အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင် သိပ်မကောင်းလို့ ဒီ ပို့စ်ကို မနည်း တင်လိုက်ရပါတယ်။ ကျမကို ကွန်မန့်ထဲမှာ လာရောက် နှုတ်ဆက်သူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ဒီကနေပဲ ပြောလိုက်ပါရစေ ... ၄-ရက်နေ့မှာ ဒီမြို့ကနေ ပြန်ရပါမယ်။ အိမ်ရောက်မှပဲ အားလုံးကို အားရပါရ နှုတ်ဆက်ပါတော့မယ်။ ကျမဘလော့ကို လာရောက် လည်ပတ်သူ အားလုံးကို ကျေးဇူး အထူး တင်ပါတယ်ရှင် ... ။)
Posted by မေဓာဝီ at 10:42 PM4comments
ကြိုဆိုပါသည် ... ဇန်န၀ါရီ ... ။
၂၀၀၈ ရဲ့ နိဒါန်း ဖြစ်ပါစေ... ။
မျှော်လင့်ခြင်းရဲ့ နိဒါန်း ... ။
လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ နိဒါန်း ... ။
မေတ္တာတရားရဲ့ နိဒါန်း ... ။
နှစ်သက် ၀မ်းသာ ရွှင်လန်း
ပြည့်စုံခြင်းရဲ့ နိဒါန်း ... ။
သူရဲကောင်းတို့ နိဒါန်း ... ။
သစ္စာတရားရဲ့ နိဒါန်း ... ။
အေးမြခြင်းရဲ့ နိဒါန်း ... ။
အဆိုးတွေ အားလုံး နိဂုံးချုပ်
ငါတို့ရဲ့ နိဒါန်းမှာ ...
ဖြစ်ရပါလို၏ .... ။ ... ။
၁၊ ဇန်န၀ါရီ၊ ၂၀၀၈
(ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသား အားလုံး ... ငြိမ်းချမ်းသာယာ မင်္ဂလာ ရှိသော နှစ်သစ် ဖြစ်ကြပါစေ ... ။)